I-FAQs-Umzi-mveliso wezoBugcisa oLungileyo
sinomzi-mveliso wethu. Ukuba unethuba, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu.
Ngaba unikeza iinkonzo ezenziwe ngokwezifiso?
Sibonelela ngeenkonzo ezenzelwe wena Nceda unxibelelane nathi kwaye sixoxe ngemveliso oyifunayo.Siza kukunika iingcebiso zobungcali.
Ndingalifumana ixesha elingakanani iimpahla zam emva kokufaka iodolo?
Kuthatha ixesha elide ukwenza ngokwezifiso imveliso, ukuba ufuna ukwenza imodeli yodongwe, kuthatha malunga neentsuku ezingama-20-25 ukwenza imodeli, kuthatha iintsuku ezingama-25 ukuya kwezi-30 ukuvelisa iimabhile okanye iimveliso zobhedu.
Ngaba ndingayibona inkqubo yemveliso?
Ewe, siya kuthumela imifanekiso yenkqubela phambili yemveliso veki nganye ukuze ukhangele ukuba emva kokuba imveliso igqityiwe, ndiza kuthatha imifanekiso kunye nevidiyo zemveliso yokuqinisekisa kwakho kokugqibela ukuba akukho ngxaki, siya kuyipakisha.
Ngaba uthutho lwakho lukhuselekile?
Sinee-packers zobuchwephesha.Xa ipakethe igqityiwe, umhloli osemgangathweni uya kujonga umgangatho wepakeji.Qiniseka ukuba iimpahla zipakishwe ngeyona ndlela ikhuselekileyo ngaphambi kokuziswa.
Ndimele ndenze ntoni xa ndifumana iimpahla ziphukile emva kokuba ndizifumene?
Ngokwenqanaba lomonakalo weempahla, umthengisi wethu uya kuthetha-thethana nawe. Buyekeza imali ethile okanye wenze iimveliso ezintsha.
Uyifaka njani imifanekiso eqingqiweyo?
Emva kokuba iimveliso zigqityiwe, siya kuzifaka kumzi mveliso kube kanye.Ndingakuthabathela imifanekiso yenkqubo. Okanye wenze imifanekiso yofakelo. Ukuba imveliso inzima kakhulu, sinokuya kwilizwe lakho ukukhokela ufakelo.
Uqala njani ukusebenzisana?
Siza kuqala siqinisekise uyilo, ubungakanani kunye nezinto zokwakha, emva koko sijike ixabiso, emva koko ikhontrakthi, emva koko sihlawule idipozithi.Siza kuqala ngokuveza iimveliso.